Iindaba-ngo-Novemba 11, 2018 yenkampani ye-flo yaseCanada
Ngomhla kaNovemba 11, 2018 inkampani yase-Canada yase-Canada
Wamkelekile ngokufudumeleyo Inkampani yaseCanada Stream Flo ukuba ityelele icepai
Nge-14: 00 ngokuhlwa nge-11 ka-Novemba ngo-2018, u-Curtis altmiks, umlawuli wokuthenga we-Stream Flo Inkampani eCanada, kunye no-Trish Nadeau, umphicothi zincwadi zokuthengwa kweempahla, ehamba no-Cai Hui, umphathi jikelele wenkampani yase-Shanghai, batyelele i-cepai kuphando. UMnu Liang Guihua, uSihlalo we-cepai, wayehamba ngobubele.
I-Stream Flo Inkampani yasekwa ngo-1969, ngoyena mhambisi mkhulu wezixhobo ze-petroleum assembly eCanada, kwaye iimveliso zayo zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-300 kwihlabathi liphela. Ngokunyuka kwemakethi ye-petroleum oomatshini kulo nyaka, ishishini lehlabathi leStream Flo Inkampani liyanda ngokukhawuleza, ngenxa yeemfuno zophuhliso, kufuneka ngokungxamisekileyo bafune iivelufa kunye nabanikezeli bezincedisi eTshayina.
Ikhatshwa ngumphathi jikelele we-CEAPI, iqela le-Stream Flo Inkampani livavanye iinkqubo zokuvelisa kunye nezokuveliswa kweemveliso ze-CEPAI ezivela kwimathiriyeli ekrwada, ukurhabaxa komatshini, unyango lobushushu, ukugqiba, ukuhlangana, ukuhlolwa kwemizi-mveliso kunye neenkqubo ezahlukeneyo zokuvelisa. Ngalo lonke uhlolo, uTrish Nadeau uhlawule ngokukodwa ukujongana neenkcukacha zeemveliso ze-CEPAI kwinkqubo yokuvelisa, njengokulawulwa kokulandeleka kunye nokukhuselwa kokuvela kwemveliso njalo njalo, kwaye iziphumo beziyanelisa kakhulu.
Yonke inkqubo yokuhlola iyathandeka kwaye iyanelisa. I-Stream Flo Inkampani ikholelwa kumandla emveliso ye-CEPAI kunye nokukwazi ukusebenza kwenkqubo esemgangathweni. UCurtis altmiks uthe entlanganisweni ukuba uzimisele ukuseka ubudlelwane kunye no-CEPAI. Usihlalo uMnu Liang unombulelo kakhulu kwiqela le-Stream Flo ngokuthatha ixesha labo emsebenzini wabo oxakekileyo ukutyelela iCepai. Kwaye wathi i-CEPAI izakwenza iinzame ngakumbi kumgangatho wemveliso kunye nexesha lokuhambisa ukuhlangabezana neemfuno zeNkampani yeStream Flo.